Exynos 990: processor-ka cusub ee Samsung hadda rasmi ayuu yahay | Androidsis
Exynos 990: processor-ka cusub ee Samsung waa rasmi
Hadday shalay soo shaac baxday in ugu dhakhsaha badan aan ka filan karno processor ka Samsung, qaabkan cusub horay ayaa loo yiqiin. Shirkadda Kuuriya wuxuu inaga tagayaa Exynos 990. Processor-kan cusub ee shirkadda ka socda waxaa hubaal ah in taleefannadooda laga soo saari doono sannadka 2020, wax badanna ay wadaagaan processor-ka oo aan ku aragnay Galaxy Note 10, sidaa darteed wuxuu ballan-qaadayaa inuu yahay mid xiiso leh.
Mid ka mid ah dhinacyada ugu muhiimsan ee Exynos 990 ayaa ah in lagu soo saaray 7 nm. Marka waxaan arki karnaa in Samsung horeyba u sameysay boodbood sidoo kale, iyadoo ay naga tagtay dhowr bilood ka hor iyada oo la adeegsanayo qalabkeedii ugu horreeyay ee sidan lagu soo saaray. Sharad shirkaddu waxay umuuqataa mid cad.
Xaaladdan oo kale, 7 nm lithography ultraviolet xad-dhaaf ah ayaa loo isticmaalaa. Exynos 990-kan wuxuu adeegsadaa ARM Mali-G77 MP11 GPU, taas oo u oggolaanaysa inay yeelato 20% waxqabad wanaagsan marka loo eego processor-radii jiilkii hore. Sidaa darteed, waxay noqon kartaa jab fiican marka ay timaado ku ciyaarida taleefanka.
NPU kama maqnaan karin kiiskan. Mid wuxuu ku dhexjiraa processor-ka, oo ay weheliso qeybta wax soosaarka dhijitaalka ah (DSP). Intaas waxaa sii dheer, isbeddel muhiim ah ayaa ah in xaaladdan ay leedahay laba qaybood. In kasta oo taageerada, loogu talagalay DDR5 RAM kiiskan, sida shirkaddu u xayaysiiso.
Exynos 990 waxay leedahay taageero loogu talagalay dareemayaasha 108 MP, marka laga hadlayo hal dareere. Sidoo kale iyadoo la taageerayo isku-darka laba-laabka ah 24.8 + 24.8 MP, sida ku cad waxa la bartay. Xaaladda taageerada shaashadda, waxaan haysan karnaa illaa 120 Hz heerka cusbooneysiinta kiiskan, taas oo ah cunsur kale oo muhiim ah.
Waxsoosaarka ballaaran ee Exynos 990 ayaa la filayaa inuu socdo in la bilaabo dhamaadka sanadkan. Waxaan hubaal ku arki doonnaa qaar ka mid ah taleefannada sare dhammaadka sanadka soo socda. Waxaa laga yaabaa in noocyada buuxa ee Galaxy S11, ama qaar ka mid ah. Laakiin shirkaddu ma xaqiijinayso wax ku saabsan taleefannada loo isticmaali doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Exynos 990: processor-ka cusub ee Samsung waa rasmi
Android Auto wuxuu si xad dhaaf ah ugu shaqeeyaa dalal badan oo Latin Amerika ah